China New Outdoor Garden Blown White Furniture Set for Wholesale, wholesale Outdoor Sofa on TopChinaSupplier.com
Indawo yokubonelela Furniture Ifenitshala yangaphandle Isofa yangaphandle China Iplani eNtsha yangaphandle yeGadi eVulekileyo eMnyama iseti yeVenkile enkulu
China Iplani eNtsha yangaphandle yeGadi eVulekileyo eMnyama iseti yeVenkile enkulu
Igama lemveliso Ifenitshala eMhlophe kunye neMhlophe isetyenziselwa ukuthengiswa ngokubanzi
Yindawo awazalelwa Guangdong, ChiGrinder na
kuxhomekeka kwizicelo zakho, ukuba ilungelo lakho lokwenza uphawu liza kubekwa kwimveliso yethu.
Ngaphandle koko, siya kuphakamisa iimveliso ezifanelekileyo kunye neenkcukacha zereferensi yakho.Umbuzo 4: WherNgaba umzi-mveliso wakho? Injalo Ulawulo LWERIMOTHI convener ukutyelela eyakho Isihluzo setyala umzi-mveliso?A: Siyi-locatIzixhobo Zokuzala zegesi kunye nezixhobo Ed kwi-guangdong zhaoqing indawo yophuhliso lobuchwephesha,
Umbuzo 5: Ndingafumana isampulu phambi kobunzima okanyeOomatshini bokumba der?
A: Ngokuqinisekileyo. Sibiza umrhumo wesampulu kabini kwaye imodeli enye yesampula iya kubuyiswa emva kwetyala lakhoqinisekisa iodolo yakho.
Ifanitshala entle yangaphandle yendawo yokuhlala yegumbi lokuhlala
US $ 242.64 / Iiseti
Isitayile sase Yuropa isitulo esenziwe ngentambo elungiselelwe isitulo sokutya esithengiswayo
Indoor ye-Antique yeNdleko eziPhezulu yokuSebenza yeNdlela
Ifenitshala yeGadi yeWicker iRattan Itheyibhile kunye nesihlalo esingaphandle sePatio yokuDlela sePatio
US $ 385.00 / Beka